धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा निशुल्क औषधी वितरण कक्ष स्थापना::Online News Portal from State No. 4
कक्षबाट बिरामीहरुको लागि ७० प्रकार औषधी निशुल्क वितरण गरीने
बागलुङ, ६ असार – धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङले लक्षीत वर्गका बिरामीहरुको लागि ७० प्रकारका औषधीहरु निशुल्क वितरणको काम थालेको छ । बिहिबार अस्पतालले छुट्टै कक्ष स्थापना गरेर बितरण अभियानको सुभारम्भ गरेको हो । अस्पतालमा यसअघि एउटा मात्र भवन भएकोले बितरण कक्ष स्थापना भएको थिएन । अस्पतालमा रहेको फार्मेसीमै गएर निशुल्क औषधि खोज्नु पथ्र्यो । जाने बुझेका बाहेक अन्यले फार्मेसीमा पुगेर निशुल्क औषधि पाउन सकेका थिएनन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिकै अगुवाईमा हालै निर्माण सम्पन्न भएको बी ब्लकमा औषधि बितरण कक्ष स्थापना गरिएको हो ।
अस्पतालमा १० बर्ष देखि निर्माण नसकिएर अलपत्र रहेको बी ब्लकमा बिहिवारबाटै फार्मेसी, टिकट काउन्टर, हाडजोर्नी, नाक कान घाँटी उपचार कक्ष समेत स्थापना गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी राना मगरले बताए । उनले अस्पताल व्यवस्थापन समिति, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट समेतको टिम लाग्दा यो सफलता पाएको बताए । अस्पतालमा केही समय देखि धेरै सुधार गर्न सफल भएको समेत उनले दाबी गरे । अस्पतालमा केही समय देखि मात्र बिशेषज्ञ चिकित्सकहरु आएर सेवा दिन थालेका छन् । यो सेवा बढेपछि बिरामी आउने क्रम समेत बढेको उनले बताए । यस अघि अधिकांस बिरामीले पोखरा उपचार गर्न जाने गर्थे । अस्पतालको व्यवस्थापकीय सँगै उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि वर्तमान समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । उनले आफ्नो क्षमताले गर्ने काम बाहेक दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक समेत आएकोले अब केही सहायक स्तरका प्राविधिकहरु बढाउनु पर्ने भएको बताए । अस्पतालले केही सातादेखि आधुनिक प्रकारको शव राख्ने बाकस पनि ल्याएको छ । साथै पोष्टमार्टम कक्ष पनि बनाएको छ । औषधि बितरण कक्ष उद्घाटन गर्दै बागलुङ नगरपालिकाका प्र्रमुख जनकराज पौडेलले जनताले तिरेको करको सरकारले जनताकै हितको लागि खर्चन सक्नुपर्ने बताए ।
‘जनतामा विश्वास भयो भने उपचार र अन्य सेवाका लागि बाहिर नगइ यहीका संरचनालाई सुधार गर्न तम्सिन्छन्’ पौडेलले भने, ‘हामीले दिने सेवा र वातावरणमा जनताको विश्वास टिकेको हुन्छ ।’ केही समय देखि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले राम्रो काम गरेकै कारण यो सुधार भएको उनले बताए । अस्पतालमा देखिएको डाक्टरको अभाव र डाक्टर बस्ने आवासको अभाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस अघिका चुनौती आएको उनले बताए । पहिले देखि नै अस्पतालमा निशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधिहरु ठाँउको अभावमा वितरण गर्न सकिएको थिएन । अस्पतालको नव निर्मित ‘वि ब्लक’ सञ्चालनमा आएपछि यो सहजता भएको रानाले बताए । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी राना मगरको अध्यक्षता र सदस्य शालिकराम शर्माको सञ्चालनमा सुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।